अझै १२ कम्पनिको आइपीओको आउदै! - Himal Dainik
अझै १२ कम्पनिको आइपीओको आउदै!
काठमाडौँ १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १२:२१
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १२ कम्पनिले प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । प्राथमिक सियर निस्कासनको अनुमति मागेका १२ वटा कम्पनीलाई बोर्डले विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय कम्पनीले जारी गर्ने साधारण सेयर (आईपीओ) मागभन्दा अत्याधिक बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । दोस्रो बजारमा जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्तालाई कम्पनिको साधारण सेयरको खरिदमा रुचि बढेको छ। त्यसैले त केहि समयमा कुनै पनि कम्पनिको आईपीओ खुल्ने बित्तिकै मागभन्दा अत्याधिक बढी आवेदन पर्ने गरेको छ ।
साधारण सेयरमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा कारोबार हुने गरेको सेयर दोश्रो बजारमा कारोबार हुँदा बढ्दै जान्छ । १२ कम्पनिमध्ये बोर्डले ३ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक समीक्षामा राखेको छ भने ३ वटा कम्पनीलाई समीक्षा गरेर टिप्पणी पठाइएको छ । अन्य ६ कम्पनी पनि समीक्षा अवधिमै रहेका बोर्डले जानेको छ । यसबर्ष मात्र हालसम्म ११ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासन भइसकेको छ भने थप १२ वटा कम्पनीको सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् ।
अघिल्लोनेकपाका नेताको गाडी तोडफोड, कार्यक्रम नगर्न दाहाल–नेपाल समूहको धम्की
पछिल्लोआज सुनको मुल्य कति?